Ben Carson Diki Yemwana Nhau uye Untold Biography Chokwadi
musha nyika dzakabatana Vanachiremba Dr. Ben Carson Childhood Nhau Plus Untold Biography Chokwadi
Ben Carson Biography Chokwadi.
Achitaura Ben Carson Biography, tinotarisa kuti tizive nyaya yake yeUcheche, Hupenyu hwepakutanga, Vabereki, Hupenyu hwemhuri, Hukama, Kuroora, Hupenyu Hwevanhu, Net kukosha, Mabhuku, Chitendero uye yake Untold Chokwadi. Kutsvaga kwakazara kwezviitiko zvakakomba zvakatenderedza Mazuva Ekutanga kwake kusvikira azivikanwa.
Aizivikanwa nekuve wekutanga Neurosurgeon kuti abudise kupatsanura mapatya akaunganidzwa akasungirirwa kumashure kwemusoro uye aichimbova purezidhendi weUnited States. Gara kuburikidza isu sezvatinozarura uye kukuzadza iwe inonakidza yehupenyu nyaya yaBen Carson.
Ben Carson Childhood nyaya:
Aine mazita akazara saBenjamin Solomon Carson Sr. Iye akazvarwa 18th munaGunyana 1951 kuna baba vake, Robert Solomon Carson naamai, Sonya Carson (nee Copeland) muguta rine vakawanda reDetroit muMichigan, US. Amai vaCarson vaive gumi nevatatu (13) uye baba vake vaive makumi maviri nemasere (28) pavakaroora.
Pazera ramakore masere (8), vabereki vaBen vakarambana saka aifanira kugara naamai vake nemunin'ina wake, achigara kwenguva pfupi muBoston, Massachusetts, US; panogara mhuri yake yembereki uyezve odzokera kuDetroit.
Semwana, Ben akarererwa mumhuri yevarombo, imba ine mubereki mumwe mumigwagwa yemukati yeDetroit nemukoma wake mukuru. Haana kumbobvira achiri mudzidzi akanaka uye aiswerekera shure kweaidzidza navo muChikoro. Wake waiwanzo kusekwa nevaaidzidza navo saka akazviona ari iye Dumbest mwana wepasirese.
Zvakangodaro, amai vake vakaramba kumuona saDhimbe. Iye achitora zviito, akavimbisa kuti Ben nemunun'una wake mukuru vaiona zvishoma zveTV; Zvirongwa zviviri (2) vhiki. Uyezve kuverenga mabhuku maviri vhiki imwe neimwe kubva kuDetroit Public Library.
Uye mukati mechinguva chegore nehafu, Ben Carson akaenda kubva pasi pekirasi kusvika pamusoro wekirasi. Shamwari uye vaaidzidza navo vakabvunzurudzwa neCNN, zvisinei, vakayeuka Carson kunge akanyarara, bookish uye nerdy.
Ben Carson Mhuri Yemashure:
Nekuda kwekurambana kwemubereki wake, mhuri yakatambudzika seSonya, mai vaBen vaifanira kuita mabasa maviri (2) kusvika matatu (3) panguva kuti vawane mari yekuwana. Ainge asingade kugara zvakanaka sezvo baba vaBen vasina kana kumbovatarisa.
Ben Carson Mhuri Dzinobva:
Kuve mutema kunotoita Ben Carson muAfrica American. Mhuri yake inodzidziswa kuenda kuEast Africa nekubatana nemadzitateguru evagari vemo vekuKenya vekuTanzania, kubva kurudzi rweTurkana.
Ben anogoverana midzi yakafanana yeKenya sezvaimbove purezidhendi weUS, Barack Obama.
Ben Carson's Dzidzo:
Carson's Detroit Public School dzidzo yakatanga muna 1956 aine kindergarten paFisher School kusvika hafu yekutanga yechitatu giredhi, panguva yese yaaive ari avhareji mudzidzi. mushure mekunge vabereki vake varambana, akaenda kune chikoro chidiki cheSeventh-day Adventist chikoro cheBoston kweisingasviki gore uye akadzoka kuDetroit Public zvikoro.
Yakawanda yenguva yekudzidzira paSouthwestern High School iri mukati meguta Detroit yaipedzwa nematambudziko ekutsiura, saka hapana aidzidza chero chinhu. Zvakangodaro, akawana yakawandisa yekuwedzera kudzidzisa mushure. Pashure pacho, akanyoresa uye akazopedza kudzidza aine BA mune psychology kubva kuYale University kwaakapihwa huzveri hwakazara hwekufunda, mukamuri nepabhodhi.
Kutsunga kuve Chiremba, akaenda kuYunivhesiti yeMicrosoft Medical School. Ipapo ndipo paakaziva kufarira kwake mune zvemanyoka uye akafunga kuzviita hunyanzvi hwake. Akadzidza neMD uye akasarudzwa kuAlpha Omega Alpha Honor Medical Society.
Ben Carson Basa Rinovaka-kumusoro:
Pazera ramakore (8), Carson akange arota nezvekuva chiremba wemamishinari. Nekudaro, makore mashanu (mashanu) akazotevera akashuvira mararamiro ehupfumi evarapi vepfungwa anoratidzwa paterevhizheni. Munun'una wake achitora chinyoro, akamutengera kunyorera kuPsychology Mazuva ano okuzvarwa.
Ben Carson Biography- Nzira yekuenda Mukurumbira:
Mushure mekupedza kwake chikoro chekurapa, Ben akave mugari weNeurosurgeon kuchipatara cheJoh Hopkins Hospital chakakurumbira muBaltimore muna 1997. Kubata kwake kwakasarudzika neziso kwakamuratidza kuva chiremba akanaka.
Gare gare, chipatara cheAustralia muPerth; Sir Charles Gairdner Kuchipatara kupfupi Neurosurgeons akatsvaga hunyanzvi hwaBen hwaakakamanikidza. MuAustralia, akawana makore anoverengeka 'ekuziva munguva pfupi. Kudzoka kumashure kweimwe gore gare gare, kuJohani Hopkins Hospital akaitwa Co-director weJohn Hopkins Craniofacial Center.
Ben Carson's Biography- Simuka Mukurumbira:
Nhoroondo yakagadzirwa muna 1987 apo akatungamira timu yevanamakumi manomwe (70) Vanachiremba mukuvhiyiwa kukuru kuti vaparadzanise mapatya maviri (2) 7-mwedzi craniopagus. Kuvhiya kwacho kwakatora maawa makumi maviri nemaviri (22) uye kubudirira kukuru.
Mukurumbira wake wakatanga kupararira, apedza akazokokwa akawanda kubva kunyika dzakasiyana siyana. South Africa muna 1994, Zambia muna 1997, Iran muna 2003 uye zvimwe zvakawanda.
Izvo zvakakodzera kuti uzive kuti pamberi pekutanga kwaBen Kubudirira kupatsanurwa kweVakabatana Mapatya neVaviri Vana vari vapenyu, hapana chiremba akambowana icho budiriro. Yaive yekutanga yerudzi rwayo munyika; sezvo mumwe (1) kana vaviri vevana vaizorasikirwa neupenyu.
Ben Carson Wezvematongerwo Enyika Basa:
Achienda pamubhadharo muJohani Hopkins Hospital, saDirector wePediatric Neurosurgery, Purofesa uye Co-director weCranofacial Center muna 2013. Ben akatanga kuratidza maonero ake ezvematongerwo enyika pachena uye akazoburitsa kuzivisa kwake seMutungamiriri muguta rake rekuDetroit.
Iye anozivikanwa seanotaura akasarudzika Republican. Muna 2012, iye akaburitsa America iyo Kunaka: Kutsvaga zvakare Chakaita Nyika Ino Yakakura.
Akasimuka akatanga mukurumbira mushure mekutaura kwake muna 2013 kuNational Prayer Breakfast uko akatsoropodza Mutungamiri Obama mitemo yekuchengetedza hutano (mutero uye hutano hwehutano) apo mutungamiri anga akangogara tsoka chete kure. Parizvino ndiye Sekiritari weDhipatimendi Rezvekugara uye Urban Development sekusarudzwa uye kusimbiswa neTrump kutonga muna 2017.
Ben Carson Wawakaroorana naye:
Iko kwesimba uye yakadzama kudzidza paYale haina kugona kudzora vane tarenda Neurosurgeon kubva pakuwana rudo. Kunyangwe achiri kuYale University, Ben akasangana naLacena 'Pipi' Rustin muna 1971. Duo rakadanana nemumwe nemumwe semuudzidzi uye rakazoroora muna 1975.
Pipi munyori wekuAmerica uye bhizinesi. Iye zvakare muongorori akadzidziswa mumhanzi uye aive wekutanga violinist muNedlands Symphony. Muchato wake kuna Ben Carson wakashongedzwa nevanakomana vatatu (3) (Rhoeyce, Benjamin Jr., uye Murray), pamwe nevazukuru vanoverengeka.
Ben Carson Hupenyu Hwemhuri:
Zvishoma zvinowanzotaurwa nezve nezve Baba vaBen Carson maererano neBiography yavo. Baba vake vaifanira kusiya Amai vaBen Carson paMuchato wavo wekutanga. Kunyangwe hazvo Ben asina kubva kumhuri yemhuri nababa, mai nevana. Akanakidzwa nekutsungirira kutungamira, kurangwa uye kusimudzwa zvaakapihwa naamai vake kwaari nasekuru wake mukoma nemubhadharo wakakura.
Zvimwe Nezve Baba vaBen Carson:
Robert Solomon Carson, Jr. akaberekwa muna 1914 ari Hondo Yenyika II US Veteran veteran, Robert Carson aive mushandisi weBaptist, asi gare gare mushandi weCadillac mota unoshanda. Aibva kumhuri hombe kumaruwa Georgia, uye akambogara kumaruwa Tennessee paakasangana naamai vaBen uye ivo vakaroora.
Mufundisi weBaptist akafa muna 1992 muDetroit aine makore makumi manomwe nemanomwe chirwere cheParkinson.
Zvimwe Nezve Amai vaBen Carson:
Sonya Robinson Carson ndiye amai vaBen Carson. Ivo mai vasina murume vane dzidzo yepamutemo. Sonya Carson akazvarwa 24th Zvita 1928, uye akakurira mumaruwa Tennessee mumhuri yakakura.
Akarwisa kushushikana apo aishanda maawa akawanda pamabasa akasiyana siyana panguva imwe chete semushandi wepamba. Iye ndiye pesheni yekuumba pahupenyu hwaBen Carson. Sonya akadzidzisa vanakomana vake kuti zvaive musimba ravo kuchinja mamiriro ehupenyu, zvese muzvidzidzo uye mune zvemari.
"Hupenyu hwake hwakawedzera hwaive, 'Dzidza kuita zvakanaka kwazvo, uye Mwari anozorora.'" Anodaro Ben Carson. Sonya akange awanikwa aine chirwere cheAlzheimer's Disease muna 2011 uye akapfuura, 6th yaNovember 2017.
Zvakawanda Nezve Vana vaBen Carson:
Ben Carson aive nevanakomana vatatu naSonya anoti; Rhoeyce, Ben, Jr., uye Murray. Vese vatatu vevanakomana vaCarson, vanga vakanyarara zvine chekuita nemukurumbira wababa vavo.
Iye akapedza kudzidza paYunivhesiti yeDelaware, uye Stevenson University zvichiteerana. Anoratidzika kuve ane kumashure kwakasimba mune zvemari accounting uye kuongorora, uye inozivikanwa CPA (Certified Public Accountant CPA).
Rhoeyce jaya rakazvipira uye rinokudzwa jaya, uye mumwe wevanhu vane hanya kwazvo vaungatarisira kusangana navo. Akaroora Lillianah Shabo. Nguva yake yakakamurwa pakati pebasa, kudzidza, kuchechi uye kupedza nguva nemukadzi wake mutsva anodikamwa.
Benjamin Carson Jr:
Mwanakomana waBens Carson wepakati, Ben, Jr., anozivikanwawo se "BJ," mubati wezvemari, zvakare sachigaro uye pamwe muvambi weInterprise Partners, inosimudzira yakavakirwa pamutemo Maryland. Akaroora Dr Merlynn Carson. Vane mwanasikana ane makore matatu okukura anonzi Tesora. Iye zvakare anogamuchira muBaltimore's 3 Under 35 mubayiro.
Murray Carson ane Master's of Science muAppared Information Technology kubva kuTowson University uye akawana Bachelor's Science kubva kuYale kuMechinjiki Mechaner. Iye zvechokwadi anoratidzika kuva anonyanya kunetsa kune vatatu, kunyora kusika uye kutaura paruzhinji zviri pakati pehunyanzvi hwake hwepamusoro. Akaroora Lerone Allen.
Murray anoda zvetsiva, ping pong, asi kupfuura zvese, kushandisa nguva kutamba mitambo yevhidhiyo nemukadzi wake.
Zvimwe Nezvevakomana vaBen Carson:
Ben Carson aingova nemunun'una, hama yainzi Curtis. Iye ane makore mashoma akura kuna Ben, akazvarwa muna Zvita, 1949. Curtis aifanira kupfuura nemuitiko imwechete yakaitika kuna Ben Carson. Anonyanya kudzidza. Curtis Carson aneronautical mainjiniya.
Curtis akaroora uye angangoita makumi manomwe nemumwe (makumi manomwe) emakore. Anogara muPeachtree, Georgia.
Zvimwe Zvakawanda nezveBen Carson Vedzinza:
Kunyangwe isu tichiziva mai vaBen kuti vave nevanin'ina vakawanda, kwete zvakawanda zvinozivikanwa nezvavo kunze kwehanzvadzi yake mukuru Jean Avery; Tete vaBen. Vamwe babamunini vake vaive, Eddie naJohn. Fairell Tubbs naCerise Rustin Zano ndivo vatezvara vake uye hanzvadzi yake mumutemo zvakateerana.
Zvingangove chokwadi kuti iye ane hama uye hama (pamwe) nababamunini (s), asi zvakawanda hazvizivikanwe maererano navo futi.
Ben Carson Mabhuku
Inonyanya kufarirwa yeBab's Mabhuku inoramba iri autobiography yake muna1990 "Ane Chipo Maoko: Iyo Ben Carson Nyaya," iyo yakafuridzira firimu rezita rimwechete rinotora nyeredzi Cuba Kunyorera Jr.. Mamwe mazita anosanganisira — Funga Chikuru (1992), Chikamu Chikuru (1999), uye Tora Njodzi (2007).
Mabhuku ari pamusoro pehunyanzvi hwake hwekudzidza, kubudirira, kushanda nesimba uye kutenda kwechitendero. Iye anogamuchira iyo Library yeCongress '"Living Legend" mubairo.
Chitendero chaBen Carson:
Mukubatana nemukadzi waBen, Ivo vari vaviri nhengo dzeSeventh-day Adventist Church (SDA). Ben Carson akashanda semukuru wemunharaunda uye mudzidzisi weSabata reSabata. Kunyangwe hazvo Carson ari muAdventist, chechi iyi yakayambira zviri pamutemo vashandi vekereke kuti varege zvematongerwo enyika.
Vakurudzirwa nehupenyu hwaSonya nemafungiro aakadzidzisa, Ben nemukadzi wake Candy vakagadzira Iyo Carson Scholars Fund kuti vatsigire zviitiko zviviri zvikuru - Iyo Carson Scholars Chirongwa neBen Carson Kuverenga Project. Wokutanga mubayiro kudzidza kune vadzidzi vakaratidzira yakakwira zviyero zvesimba kugona uye basa munharaunda. Yechipiri inopa mari kuzvikoro kuti isimudzire nekuchengetedza Ben Carson Kufundwa Makamuri.
Ben Carson Hupenyu hweMunhu:
Mukuwirirana nemaitiro evazhinji ma Adventist, Ben ari Lacto-Ovo wemiriwo (anodya ndiro dziine mukaka, mazai, kana chizi, uye apo neapo, huku). Chikonzero chake chekuve miriwo parutivi kubva kune zvakanakira zvakatipoteredza zvaive nehutano hwehutano, kusanganisira kudzivirira zvipararira uye chirwere chemoyo.
Zvaanofarira kuita anoramba achiverenga uye zvakare achiteerera kuBaroque uye mimhanzi yemhando yepamusoro. Carson anofarira kuteerera mimhanzi yechinyakare paanenge achishanda, anoti zvinomu bata.
Ben Carson's Mararamiro:
Nepo Ben angangodaro akavaka zvakanyanya kubva pabasa rake rezvekurapa, iye akaita basa repiri rinobhadhara semunyori uye mutauri wepachena. Carson anoenderera mberi nekuwana zviuru zvemadhora mune zveumambo gore rega rega kubva mumabhuku, kusanganisira yake memoir Chipo Maoko: Iyo Ben Carson Nyaya.
Iyo yakagara pameso neurosurgeon uye Donald Trump's munyori wezvekuchengetedzwa kwedzimba anokwenenzverwa anofungidzirwa kunge mamirioni mazana maviri emamirioni, maererano naForbes. Ane muhoro wepagore wemadhora mazana mazana maviri nemakumi manna nemazana matanhatu, kubva pagore ra26 .Akawana mari inodarika mazana mana emadhora kubva pamakumi mana nematanhatu mitauro yakabhadharwa kubva kuJanuary 213,600 kusvika May May, maererano neThe Wall Street Journal.
Ben naCandy Carson vane nzvimbo makumi mana nemaviri ekuEpperco, Maryland. Muna 2013, Carson, mudzimai wake uye amai vakatamira kuWest Palm Beach muFlorida.
Ben Carson's Untold Chokwadi:
Chokwadi # 1- Rekodhi Nhamba Yekuvhiya:
Asati asara pamudyandigere, Carson anonzi akambovhiya mazana matatu pagore pagore, zvakapetwa katatu paavhareji chero yemuropauroson. Anonyengetera zvakare pamberi pese pakuvhiya kwaakaitwa.
Ichokwadi # 2- Iyo Muvhi Star:
Carson akazvitamba mumutambo we2003 "Stuck on You," mutambo unotaura nezve mapatya akaungana naMat Damon naGreg Kinnear.
Chokwadi # 3 Kutsvaka Kukanganwirwa:
Carson akakumbira ruregerero mushure mekutaura kuti ungochani isarudzo nekuti varume vanowanzo enda kujeri vakangobuda.
Chokwadi # 3- Kutsamwa Nyaya:
Carson aive nehasha dzakapisa dzakadudzira kuita kwechisimba semwana. Akamboedza kurova mai vake nesando nekuti vaiwirirana nesarudzo dzehembe dzake. Mune chimwe chiitiko, akapotsa abaya shamwari yake mushure mekupokana pamusoro pekusarudzwa kwenhepfenyuro.
Atyiswa nezviito zvake, Ben akatanga kunyengetera, achikumbira Mwari kuti amubatsire kuwana nzira yekugadzirisa kutsamwa kwake, achiwana ruponeso muBhuku raZvirevo. Carson akatanga kuona kuti hwakawanda hwehasha dzake kubva nekuda kwekungozviisa pakati pezviitiko zviri kuitika pedyo naye.
Ben Carson's Bio Dhata
Zita rizere: Benjamin Solomon Carson
Zita rekudanwa: Ben Carson
Zuva rekuzvarwa: 18th yaGunyana 1951
Nzvimbo yekuzvarirwa: Detroit, Michigan, US
Baba: Robert Carson
Amai: Sonya Carson (nee Copeland)
Muchato: Lacena "Pipi" (nee Rustin) Carson (1975 - aripo)
Hanzvadzi konama: Curtis Carson
Vana: Rhoeyce, Benjamin Jr. naMurray.
Hama: Jean Avery (Aunt), Fairell Tubbs (Stepsister), Cerise Rustin Zano (Sekuru mukwasha), Eddie naJohn Copeland (Uncle).
Dzidzo: Yale University (BA Psychology) uye University of Michigan Chikoro cheMishonga.
Basa: American Politician, Public Service, Munyori, uye Reension Neurosurgeon.
Chitendero: Seventh Day Adventist
Muhoro: $ 213,600 pagore (2019)
Net Worth: $ 26 M (Forbes)
kukwirira: 6 ft / 1.83m
Hobbies: Kuverenga uye kuteerera Baroque - era Vanyori (Vivaldi, Bach uye Corelli).
Isu tinotarisira kuti kuverenga kwaBen Carson nyaya yehucheche yekukunda hurombo uye kutadza kuchikoro kuve nyanzvi inozivikanwa yepasi rose kwave kuchinakidza uye kuchikurudzira. Ita zvakanaka kugovera ruzivo rwako nesu. Isu tinokuvimbisa iwe zvimwe zvebhayaroji chokwadi nepamusoro-notch chokwadi uye kurongeka; kunaya, uya kupenya. Gara wakabatana!
Feature Image Unhu: "Chirungu: Ben Carson aratidzwe semunyori weHUD ” neUnited States Dhipatimendi Rekugara uye Urban Development. Mufananidzo uyu ibasa re United States Dhipatimendi Rekugara uye Urban Development, inotorwa kana kugadzirwa sechikamu chemabasa ehurumende. Sebasa re Hurumende yemubatanidzwa yeUS, mufananidzo uri mu public domain muUnited States. Iyo Image faira ine yakatorwa mufananidzo inonzi: Faira: Ben Carson musoro.jpg.
Yakagadziridzwa zuva: Nyamavhuvhu 29, 2020
Yakagadziridzwa zuva: Nyamavhuvhu 30, 2020
Dr. Anthony Fauci Childhood Nhau Plus Untold Biography Chokwadi